Maka ọdịniihu nke Philanthropy nke Africa gbadoro ụkwụ - akwụkwọ akụkọ CAPSI
Lelee nke a na ihe nchọgharị gị.
Anyị jiri igwe igwe na-agbagharị 2022, mana ọ dabara nke ọma na ọtụtụ ntọala etinyere na njedebe nke afọ gara aga. Ebe a na-ahụ anya n'etiti afọ nke ọma, anyị ewepụtala mbipụta akwụkwọ akụkọ a iji tụgharịa uche na ụfọdụ ọrụ arụchara n'ọnwa ndị na-adịbeghị anya, yana nyekwa gị teaser nke ihe ị ga-atụ anya ịmụ, ịkwado na inye onyinye. kwupụta na ọnwa ndị na-abịa.
Ka anyị na-esonye na kọntinent ahụ n'ememme May dị ka ọnwa Africa, anyị na-ahapụrụ gị okwu Julius Nyerere nke anyị kwenyere na ọ dabara nke anyị na ọtụtụ akụkọ ndị ọzọ gbara anyị gburugburu.
"Mgbe anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ, a kụziiri anyị ka anyị na-abụ abụ ndị Europe, ole n'ime anyị ka a kụziiri abụ Wanyamwezi ma ọ bụ nke Wahehe? Ọtụtụ n'ime anyị amụtala ịgba egwu rumba, ma ọ bụ cha cha, ka anyị na-egwu egwu. rock and roll and turning and even togbawa waltz na foxtrot.Ma ole n'ime anyi nwere ike igba egwu, ma obu na anugo gombe sugu, mangala, nyang umumi, kiduo, or lele mama?"
Nke gị n'inye ihe
"CAPSI ji obi ụtọ malite afọ ahụ, na-ekwupụta 2022 afọ akwụkwọ anyị. N'ime afọ anọ gara aga, anyị na-eme nchọpụta n'ofe kọntinent ahụ, na-elekwasị anya na mpaghara nyocha dị iche iche. nkeji mbụ nke afọ agaala ngwa ngwa. N'ime naanị. Mgbe ọnwa abụọ gachara, anyị ga-agafe ọkara afọ, ma ọtụtụ ihe ka ga-eme.
M na-akpọ gị òkù ka ị nwee mmasị ịgụ akwụkwọ akụkọ a. "
Pịa ka ịgụọ akwụkwọ ozi onye isi anyị Bhekinkosi Moyo
Kemgbe mmalite anyị na 2018, anyị etoola nke ukwuu ekele maka mmekorita nke nyere anyị ohere ịnweta obodo, ohere na nkwado iji kwalite ọrụ anyị. Ndị a abụrụla ma ga-aga n'ihu na-abụ akụkụ dị mkpa nke otu Center ahụ si arụ ọrụ.
N'ịga n'ihu na onyinye ndị gara aga aga nke ọma, anyị nwere obi ụtọ ịkọrọ na Carnegie Corporation nke New York (CCNY) n'oge na-adịbeghị anya megharịrị nkwado ego ya n'ịgba mbọ anyị iji mee ka nyocha banyere ọrụ ebere nke Africa site n'aka ndị ọkà mmụta Africa n'oge mbụ, site n'inye onyinye ruru $ 200 000. Tọọ maka mmejuputa ya ruo February 2024, ego a ga-eme ka ọrụ ahụ na-eduga na-adọta. na ịkwado ndị otu na African Philanthropy.
Anyị nwere ekele CCNY maka nkwado ha na-aga n'ihu na-eto eto na-arụ ọrụ gburugburu African Philanthropy.
Pịa ebe a ka ịgụ ajụjụ ọnụ na-atụgharị uche na otu mmemme CCNY
Ihe malitere dị ka echiche ejikọtara ọnụ abụrụla ihe atụ nke otu mmekọ aka na ebumnuche nwere ike isi nye ụzọ iji gbanwee ọnọdụ nke ọdịnihu obodo.
The Aspire Higher Project na-achọ imezu ọhụụ nke ụmụ agbọghọ na ụmụ agbọghọ nọ na Sub-Saharan Africa ka ha nwee ike itinye aka na agụmakwụkwọ ahụike mmekọahụ site na ihe ọhụrụ na echiche nke na-enye ngwakọta nke mgbochi HIV yana ọrụ ahụike mmekọahụ na ịmụ nwa.
Pịa ebe a iji zute onye meriri n'asọmpi Aspire Higher
Lelee vidiyo nchịkọta nke mmemme ikpe ikpe ikpeazụ aspire Higher Final
The Center for Strategic Philanthropy na Mahadum nke Cambridge na CAPSI kwuputara mmekorita mmekorita ama ama iji ghọtakwuo mmetụta nke inye onyinye n'ofe obodo Afrika, otu ulo oru nkeonwe, ntọala na ndi mmadu ndi mmadu.
Mmekọrịta a ga-ekesa nke ọma nyocha na ihe omume ndị na-emepụta ụdị na ngwá ọrụ dabara adaba n'eziokwu ndị Africa ma jiri ohere ndị a kwadoro ọrụ na mmetụta nke usoro na ụlọ ọrụ dị iche iche na-enye.
Pịa ebe a iji mara ọkwa
Obi dị anyị ụtọ ịnabata ma soro ndị ọkachamara n'ọkwa ụwa na-arụkọ ọrụ na nzukọ anyị. Dị ka a na-ewebata gị na ndị otu anyị, anyị na-akpọ gị òkù ka gị na ndị ọrụ ibe gị na-arụkọ ọrụ site na otu ọrụ ha na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta ha.
Jacob Mati sonye dị ka osote onye isi
Prọfesọ Jacob Mati bụ mgbakwunye kachasị ọhụrụ na otu ndị nyocha na ndị nkuzi anyị na-eme mkpọtụ.
Ọ na-esonye na Center dị ka osote onye isi, na-ebute ahụmahụ ya dị ukwuu nke nwetara site na ndụmọdụ na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na ndị otu anyị.
Pịa ka ịgụọ ajụjụ ọnụ a jụrụ na ajụjụ Jacob Mati
Zute ndị otu anyị Postdoctoral Fellows
Anyị malitere mmemme postdoctoral anyị n'ebumnobi nke itolite otu nyocha gbasara ọrụ enyemaka na itinye ego na ọha mmadụ na Africa. Anyị nwere obi ụtọ iwebata mmadụ abụọ n'ime ndị otu anyị Postdoctoral, Melody Mandevere na Roselyne Cheruiyot.
Pịa ka ịgụọ ajụjụ ọnụ ajụjụ ọnụ a jụrụ na Melody Mandevere
Pịa ka ịgụọ ajụjụ ọnụ a jụrụ na ajụjụ Roselyne Cheruiyot
Zute ndị otu ndụmọdụ ndụmọdụ anyị
Kọmitii Ndụmọdụ anyị na-enye ndị otu ndị isi anyị ndụmọdụ atụmatụ ma na-akwado uto ọhụụ nke Center. Ndị otu Board Advisory na-esite na otu dị iche iche n'ofe ụwa bụ ndị isi na ngalaba nka ha. N'oge na-adịbeghị anya, anyị gbara ndị otu atọ nke ndụmọdụ ndụmọdụ anyị, Mohamadou Sy, Bongiwe Mlangeni na Ebrima Sall ajụjụ ọnụ.
Pịa ka ịgụọ akụkọ njirimara Mohamadou Sy
Pịa ka ịgụọ akụkọ Bongiwe Mlangeni
Pịa ka ịgụọ akụkọ njirimara Ebrima Sall
Ọnwa ole na ole gara aga abụrụla oge uto agụmakwụkwọ maka etiti ahụ. Na mbipụta na-esote nke akwụkwọ akụkọ, anyị ga-ewebata gị na obodo anyị nke ndị nkuzi bụ ndị soro ụmụ akwụkwọ na-emekọ ihe na Masterclasses, Diploma Postgraduate na Masters, ka ha na-eme njem ọganihu ọkachamara ha.
Ọmụmụ ihe na-enye uru okpukpu abụọ. Mbụ. ha bụ ngwá ọrụ nkuzi dị irè nke ukwuu, na-enyere ụmụ akwụkwọ aka itinye onwe ha na akpụkpọ ụkwụ nke onye dị adị n'ezie na nzukọ n'ezie ma chee echiche banyere otu esi edozi nsogbu ndị dị n'ụwa. N'ime nke a, ụmụ akwụkwọ na-amụta karịa naanị echiche nke usoro ọmụmụ n'onwe ha, kamakwa otu esi eche echiche, nkatọ na itinye ha n'ọrụ.
Ndị ikpe na Ụlọ ikpe nke Wits Business School edeela ya na CAPSI n'ime afọ abụọ gara aga enwetala nke ahụ na ọ bụ ihe obi ụtọ ịbụ akụkụ nke ọrụ a. Anyị na-akpọ gị òkù ka ị lelee ọmụmụ ihe anyị dị wee budata abtracts nke ndị a.
Pịa ebe a iji gaa na ibe Ọmụmụ Okwu
Mmemme agụmakwụkwọ Postgraduate anyị
Anyị na-atụ anya ịnabata otu ụmụ akwụkwọ ọhụrụ ndị malitere mmemme ha n'ọnwa June na Julaị. Anyị Diploma nke Postgraduate na mkpokọta akụrụngwa na itinye ego na mmekọrịta ọha a nabatara nke ọma kemgbe mmalite ya n'afọ gara aga, ebe ụmụ akwụkwọ nke abụọ ga-amalite mmemme ha na June. Ndị otu mbụ nke Nna-ukwu na African Philanthropy a ga-anabata ụmụ akwụkwọ n'ụbọchị mmeghe nke ga-eme nke ọma.
A nabatara mmemme anyị n'ụzọ zuru ezu ma bụrụ ndị a ma ama na postgraduate, nke ga-agbakwunye na njem mmụta gị. Anyị na-enye onyinye mmụta ahaziri ahazi nke ahaziri iji gboo mkpa nke otu dị iche iche na-achọ inye ndị otu ha ihe ọmụma gbasara Philanthropy Africa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụtakwu maka onyinye ahaziri iche anyị ma ọ bụ nwee ajụjụ gbasara mmemme agụmakwụkwọ mepere emepe, biko gaa na Jacob Mati.
Pịa ka ilele nnọkọ ozi maka mkpokọta akụrụngwa PGDip
Pịa ka ilele nnọkọ ozi maka MM na African Philanthropy
Nlaghachi nke klas Master dị n'ịntanetị
Ebe etiti ahụ anabatala ụwa mmụta nke ọma site na nke ọma online Masterclass usoro, nke ewepụtara na 2020 ga-aga n'ihu n'afọ a. Ndị na-eme ihe nwere mmasị na isiokwu ndị dị ka nchịkọta akụrụngwa, inye ego na ntọala obodo nwere ike isonyere anyị maka klaasị ụbọchị 2 isii ebe ha nwere ike ịtụ anya ịmụ ihe n'ime obodo nke ndị na-amụ ihe nwere echiche.
A na-enye klaasị Masters site na Wits Enterprise na ụmụ akwụkwọ ga-enweta asambodo nke mmecha maka klaasị ọ bụla mezuru. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu gbasara Masterclasses anyị, biko kpọtụrụ Keratiloe Mogotsi.
Pịa ebe a ka ikiri ozi nnọkọ maka obere nkuzi onyinye anyị
The Nlebanya mba ụwa nke Philanthropy na Social Investment bụ akwụkwọ akụkọ mba ụwa nke interdisciplinary maka nyocha gbasara ọrụ enyemaka na itinye ego na ọha.
Na-eso nke ọma nnabata na mbụ olu nke akwụkwọ akụkọ ahụ, CAPSI nwere obi ụtọ ịmalite olu nke abụọ nke akwụkwọ akụkọ. N'ịgbalị ịgbasa ọdịnaya e bipụtara na akwụkwọ akụkọ ahụ, anyị na-akpọ gị òkù ka ị nyefee akwụkwọ ndetu gị na isiokwu agụmakwụkwọ ka a ga-atụle maka ibipụta na akwụkwọ akụkọ ahụ.
Ọ bụrụ na ị bụ onye nyocha, onye na-eme nchọpụta ma ọ bụ onye nkuzi na ngalaba nke African Philanthropy, anyị na-akpọ gị òkù ka ị nyefee akụkọ ma ọ bụ ndetu ubi maka mpịakọta nke abụọ nke akwụkwọ akụkọ anyị.
Pịa ebe a ka ịlele ntuziaka
a Usoro isiokwu nyocha bụ usoro nyocha ọhụrụ ewepụtara ọhụrụ nke ndị ọgbọ nyochara nke CAPSI na-ebipụta n'adabereghị na ya dịka akụkụ nke mbọ anyị na-agba iji welite nsonaazụ nyocha nke ndị ọkà mmụta. Anyị na-akpọ gị òkù ka ị gụọ ihe mgbakwunye ọhụrụ na usoro a wee leba anya maka mgbakwunye ọhụrụ na-abịa n'izu na-abịa.
"Ịnye onyinye afọ ofufo nkeonwe nkeonwe: echiche na nkuzi sitere na Coalition Against COVID-19 Initiative na Nigeria"
Dabesaki Mac-Ikemenjima na Chimaraoke Otutubikey Izugbara dere ya
Pịa ka ịgụ akwụkwọ akụkọ a
"Private Philanthropic Cross-Border Flows and Sutained Development Na Africa"
Asabea Shirely Ahwireng-Obeng na Frederick Ahwireng-Obeng dere ya
Pịa ka ịgụọ edemede nyocha a
"Ntụle ọdịdị ala nke ntinye ego ọha na eze na East Africa"
Roland Mwesigwa Banya dere ya
Pịa ka ịgụọ akụkọ nyocha a
Kemgbe mmalite ya, ndị Kisima African inye Platform akwalitela akụkọ na mmetụta nke inye ihe sitere n'ofe kọntinent ahụ. Na mgbakwunye nke ozi anyị, anyị kwadoro nke mbụ na usoro Mkparịta ụka Kisima Quarterly ebe anyị na-etinye aka na akụkọ nke inye ihe na ndị nọ n'azụ ha, yana ịkekọrịta mmelite ikpo okwu nke ga-eme ka mbọ anyị gbakọrọ aka n'inye ihe. Okwu isi okwu nke mbipụta Kisima Quarterly Dialogues nso nso a bụ onye isi mahadum Wits, Dr Judy Dlamini.
Dị ka akụkọ banyere inye onyinye Africa na-aga n'ihu na-emegharị site n'ịkọ akụkọ, Anyị na-akpọ gị òkù ka ị nyefee akụkọ gị nke inye ihe na itinye aka na ọtụtụ akụkọ ndị a na-ekesa ruo ugbu a.
Iji nyefee akụkọ gị, gaa na ibe weebụ www.kisimagiving.org/submit-a-story/, mezue nkọwa gị wee bulite vidiyo ma ọ bụ depụta akụkọ ịchọrọ ịkekọrịta.
Ọ bụrụ na-ịchọrọ ịmatakwu gbasara Kisima African inye Platform, biko gakwuru ya Mapaseka Mokwele.
Wepu aha ya | Jikwaa ndenye aha gị
2 St Davids Ebe, Parktown, Johannesburg, South Africa, 2050
Igbe Mkpokọta 98, Wits, Johannesburg, South Africa, 2050